. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဟိုရောက် ဒီရောက် (၂)
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၂)
သူမက ဆရာမလေးပါ တကသိုလ်ကကျူတာ ဆရာမလေးပေါ့ ။ သူ့အိမ်က ဒဂုံမှာ ။ ညနေဘက်တွေဆိုရင် ကျူရှင်ပြပြီး မြို့ထဲကနေ ဒဂုံကို ပြန်လေ့ရှိတယ် ။ တစ်ရက် ညနေ နေ၀င်ရီတရော အချိန်မှာ သူမ ဆူးလေကနေ ဒဂုံကို ပြန်ဖို့ ကားစောင့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ .... ညနေဘက် ရုံးဆင်းချိန်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ လူတွေမှ အများကြီးပဲတဲ့ ။ ကားက ဂိတ်စဆိုတော့ ချက်ချင်းမထွက်ဘူးလေ .. လူကစောင့်သေးတာကိုး .. အဲဒီဆရာမလေးက ကားပေါ်မှာ နေရာရတော့ ထိုင်ပြီးစောင့်နေတုန်း ။ ကောင်လေးတစ်ယောက် အကျီစွပ်ကျယ်လေးနဲ့ နွမ်းနွမ်းဖတ်ဖတ် ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကားအောက်ကနေ အဲဒီဆရာမလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ် တဲ့ ..
ကောင်လေး - ဆရာမ
ဆရာမ - ဟင် .. ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ သား
ကောင်လေး - ကျွန်တော့ မောင် ဘယ်သူပါပေါ့ .. ကျွန်တော့အိမ် ဖုန်းနံပါတ် က ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပါ .. ဆရာမ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကျွန်တော့် ရဲ့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပေးပါ ။ ကျွန်တော် ဒီကနေ မပြန်တတ်တော့လို့ .. ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ဖို့ပြောပေးပါနော် ..
ဆရာမ - အော် .. အေးအေး သား။ ဆရာမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ်လေ ..
ကားကထွက်လာပါလေရော .. ဆရာမလည်း ကောင်လေးပေးလိုက်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားတဲ့ စာရွက်ကလေးကို မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ပြီး လိုက်လာတာပေါ့ ..
သူဆင်းရမယ့် ကျောင်းကွေ့မှတ်တိုင်ရောက်တော့ သူကားပေါ်ကနေဆင်းတယ် ..
ပြီးတော့ ကောင်လေးဆက်ခိုင်းတဲ့ ဖုန်းကို လမ်းဘေးဖုန်းတစ်ခုကနေ သူခေါ်လိုက်တာပေါ့ ..
ဟိုဘက်က အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ဖုန်းလာကိုင်တယ် ..
အဒေါ်ကြီး - ဟဲလို
ဆရာမ - ဟုတ်ကဲ့ .. အခုပြောနေတာ မောင် -- ရဲ့ အိမ်က ဟုတ်ပါတယ်နော် ..
အဒေါ်ကြီး - ဟုတ်ပါတယ် ။ ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ
ဆရာမ - အော် .. အဲဒီကလေးနဲ့ ကျွန်မ ဆူးလေ ကားမှတ်တ်ိုင်မှာ တွေ့ခဲ့လို့ပါ .. သူက သူ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပေးပါဆိုလို့ .. အဲဒီကလေး အိမ်မပြန်တတ်လို့ သူ့ကို လာခေါ်ပေးပါတဲ့ ..
အဒေါ်ကြီး - ...................
အသံတိတ်နေရာကနေ အဒေါ်ကြီးငိုချလိုက်ပါတယ် .. အကြောင်းကတော့ အဲဒီကောင်လေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်က အဲဒီကားဂိတ်မှာ ကားနှစ်စီးကြားညပ်ပြီးသေသွားခဲ့တာပါ .. ဆရာမလေးဖုန်းဆက်တဲ့နေ့ဟာ သူ့ကို အသုဘ ချပြီးပြန်လာကြတဲ့နေဖြစ်နေပါတယ် ...
တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသေချာပါဘူး .. အမ၀မ်းကွဲတစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရတာတော့ သေချာပါတယ် .. တစ်ယောက်ယောက်က လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းခင်းတာ ဖြစ်နိုင်သလို အမှန်တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. အမကိုယ်တိုင်တော့ အဲဒီနေ့က အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်လာမိမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူးတဲ့ ..
ရေးသားသူ moekhar at 1/06/2009 08:35:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဟိုရောက် ဒီရောက်
ဟက်ပီးဘတ်ဒေး မိုင်ဖားသား :D
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၃)
နီးလာတဲ့ အိမ်ပြန်ချိန် (၂၁-၁-၀၉)
၂၀၀၈ ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၁)